Chiedza chaJah mbeu | MyWeedSeeds.com
Chiedza chaJah mbanje mbanje dzinodzika kubva kune yakanyanya kupembererwa Jack Herer sativa Haze dzakasiyana uye ine simba rakanyanya. Hunhu hwaJack Herer hunotonga, zvichiita kuti Chiedza chaJah chive chimwe chemhando dzakanakisa mumbeu yembeu emporium. Chiedza chaJah chinowanzodanwa kunzi ivo vanofarira mbanje kushungurudzika neanovice uye varimi vane mwaka, zvakafanana. Anokura murefu aine mukobvu wepakati cola (wepakati bud) uyo unoburitsa masumbu mazhinji emabhureki akaremerwa kwazvo neTHC makristasi uye inonamira resin zvekuti kunyangwe mashizha ake nematavi anoputirwa. Rutivi rwake rwe sativa runoguma neyakareba nguva yakati rebei kupfuura maruva mazhinji, asi goho rake (zvirinani kana rakura mumba) rakakodzera kumirira. Chiedza chaJah mbanje inodyisa mweya nekuvhengana kwepunzwa mhiripiri Haze hwema uye tambo yakatetepa yefruity skunk. Yake yekuhwina mubairo-inoratidzira kunhuwirira kwayo - yakasimba mhiripiri Haze yakasanganiswa nemuchero wemucitrus. Chiedza chaJah chinogadzira chakasimba kune vanoputa, hunosimudzira hutachiona hwepamusoro uye giggly mood.